Rattachés directement au GSMJ
Présentation du BCCJEP
La DCN PAC
Présentation du Sécretaire Général
INSTITUTION DE L’ETAT
Jugement Supplétif de Décès
Jugement Supplétif de Naissance
Successions en l’absence de Testament
Nomenclature des emplois et des postes du Ministère de la Justice
CENI : Nahavita fianianana ireo mpikambana vaovao
La C.A.R.E.A. au Ministère de la Justice
Pejy an-tsary Alatsinainy 29 Novambra 2021 : Fananganan-tsaina teny amin’ny tokontanin’ny Fonjan’Antanimora, nialoha ireo lahateny samihafa
Fiverenan’ny voafonja eny amin’ny fiaraha-monina : Manohana akaiky ny Ministeran’ny Fitsarana ny OIT
Fanatsarana ny asam-pitsarana : « Hampahafantarina ny vahoaka ny marina» hoy ny Minisitry ny Fitsarana
Fananganan-tsaina androany 22 Novambra 2021 : Ministeran’ny Fitsarana miady amin’ny Covid-19
Fanafainganana ny asam-pitsarana : « Vitaina ny 15 Desambra ny asa » hoy ny Mpitahiry ny Fitombokasem-panjakana, Minisitry ny Fitsarana
Fitsidihan’ny Solontenan’ny Filohan’ny Vaomieran’ny Vondrona Afrikanina : Himasoana ny fahaleovantenan’ny Fitsarana
TPI Analanjirofo: Nandray ny toerany ny Filoha vaovao
Pejy an-tsary Alatsinainy 15 Novambra 2021
Posted in Annonces et Informations
ADY ATAO AMIN’NY HERISETRA MIFOTOTRA AMIN’NY MAHALAHY NA MAHAVAVY ( tohin’ny heloka mikasika ny herisetra):
Published Date: 3 décembre 2021
5- Firaisana ara-nofo tsy ara-boajanahary (actes sexuels contre nature): izany hoe ireo fomba firaisana ara-nofo tsy ara-boajanahary atao amin’ny olon-kafa, amin’ny alalan’ny herisetra, fanerena na fandrahonana.
Sazy: 2 taona hatramin’ny 5 taona an-tranomaizina sy lamandy 2.000.000 ariary hatramin’ny 4.000.000 ariary
6- Fanomezana baiko, fampiasana teny, fihetsika, soratra, hafatra, naverimberina, fanaovana fandrahonana, fanerana iniana na fampiasana zavatra hafa mba hikatsahana tombontsoa na inona na inona karazany avy amina olona iray toy ny firaisana ara-nofo, na ho an’ny tenany na ho an’olona hafa, ary izany dia tsy sitrapon’ilay olona nikatsahana firaisana ara-nofo.
Sazy: Herintaona hatramin’ny 3 taona an-tranomaizina sy lamandy 100.000 ariary hatramin’ny 1.000.000 ariary
Raha toa kosa ireo fihetsika voalaza ireo ka nataon’olon-droa na maromaro nifanaraka mialoha na tsia, tamin’ny olona iray dia :
saziana 2 taona hatramin’ny 5 taona an-tranomaizina sy lamandy 200.000 ariary hatramin’ny 2.000.000 ariary.
Posted in Autres Evenements
Pejy an-tsary androany Alakamisy 02 Desambra 2021: Atrikasa momba ny fampafantarana ireo lalàna vaovao izay ataon’ny Sampandraharaha misahana ny Fanaparihana ny Lalàna aty Tsiroanomandidy.
Published Date: 2 décembre 2021
Tsiahivina fa misy ny fandaharana momba ny « Zo sy Lalàna » ao amin’ny RNM isaky ny Alatsinainy (@8 ora alina) ary ny Alakamisy kosa ny amin’ny TVM (ao arianan’ny vaovao ariva @teny gasy).
Concours d’entrée à l’ENMG : Résultat final – Filière Judiciaire
3-Fanaovana fihetsika nalaina avy tamin’ny fomba amam-panao nentim-paharazana ka miteraka voka-dratsy ara-batana amina ankizy na vehivavy.
Sazy: 6 volana hatramin’ny 5 taona an-tranomaizina sy lamandy 100.000 ariary hatramin’ny 1.000.000 ariary
4- Fanolanana atao amin’ny vady na ny olona miombom-piainana (viol entre époux ou sur la personne engagée avec soi): izany hoe izay rehetra firaisana ara-nofo, na inona na inona karazany natao tamin’ny vady na ny olona miombom-piainana aminy tamin’ny alalan’ny herisetra, fanerena, fandrahonana.
Sazy: 2 taona hatramin’ny dimy taona an-tranomaizina sy lamandy 100.000 ariary hatramin’ny 1.000.000 ariary.
Fitsarana manakaiky vahoaka: Fidinana ifotony ao Tsiroanomandidy
Published Date: 1 décembre 2021
Fitsarana manakaiky vahoaka. Mitohy ny fidinanana ifotony ataon’ny Sampandraharaha misahana ny Fanapariahana Lalàna, ao amin’ny Foibem-pitantanana misahana ny Fandinihana sy ny Fanavaozana Lalàna (DERL) eto anivon’ny Ministeran’ny Fitsarana. Aty Tsiroanomandidy indray no misitraka ny atrikasa fampahafantarana ireo lalàna vaovao nanomboka androany, Alarobia 01 Desambra 2021.
Mpiofana ireo Ben’ny tanàna sy lefiny, Mpiandraikitra ny sora-piankohonana, Sekretera miandraikitra ny sora-piankohonana, Lehiben’ny Boriborintany avy eto amin’ny Distrikan’i Tsididy sy Fenoarivobe. Rahampitso kosa dia natokana ho an’ny vahoaka.
Ny atrikasa dia mifantoka amin’ny lalàna momba ny sora-piankohonana, ny fanambadiana, ny herisetra mifototra amin’ny maha-lahy na maha-vavy (VBG), paik’ady heloka, ny zaza tsy ampy taona manao fandikan-dalàna/heloka ary koa ireo zon’ny ankizy. Manohana ny atrikasa ny PAJMA.
Tableau de ressorts des Juridictions
Statut de la Magistrature
Mise en Place des Juridictions
Code de Déontologie des Magistrats
Code de conduite Personnel Judiciaire
Maisons de Force/Maisons Centrale
Maison de suretée
Textes régissant l’AP
Statut du Personnel AP
Agence Française pour le Développement (AFD)
TRIBUNAL ADMINISTRATIF DE TOLIARA
REGISTRE NATIONAL DES COMMERCES ET DES SOCIETES (RNCS)
Plateforme e-learning ENMG
CENTRE NATIONAL D’INFORMATION ET DE DOCUMENTATION LEGISLATIVE ET JURIDIQUE
RECHERCHE DE LOIS ET REGLEMENTS
Concu par Le Ministère de la Justice